CA ILL ACTION
Aakar March 28, 2008
चुनाव आउन मात्र १३ दिन बाँकी । तर आमजनताको मनमा अझै पनि साँच्चै चुनाव हुन्छ र भन्ने आशंकाहरु । ती आशंकाहरु बिना काम मै आएका भने हैनन् । नेता तथा पार्टिहरुको दिनहुँ को रवैयाले पनि यही नै संकेत गर्छ कि,यो चुनाव हुन गाह्रो नै छ, चुनाव भैहाले पनि निष्पक्ष हुने छैन,अनि राजनितिक जटिलता झनै बढ्दै जानेछ । चुनाव को मुखमा यी कुराहरु भन्न नहुने तर के गर्नु,जताततै डामाडोल देखेपछि भा’को कुरा त गर्नै पर्छ,मन थामेर बस्न सकिँदैन । यही चुनावको निहुँमा दिनैपिच्छे कुटाकुट परिरहेकोछ,झडप परिरहेको छ । दिनहुँ सयौँ को सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरु घाइते भैरहेकाछन्,कतै-कतै त केही ले ज्यानै पनि गुमाइसकेकाछन् । हैन , यो चुनाव भन्ने चिज नै यस्तै हो कि क्या हो ?
चुनाव अपरिहार्य छ,परिवर्तन का लागि , नयाँ सोच र नयाँ कामका लागि । तर “आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का” भन्ने कुरा गर्नाले स्थिती सन्तोषजनक भने देखिएको छैन । सबै नेता र पार्टिहरु जनताको दुहाइ दिन्छन् –“जनता ले यो चाहेको छ,जनताले त्यो चाहेको छ,जनता हाम्रा पक्षमा छन्” । देश धेरै अस्थिर भएको छ तर नेताहरु सजिलै पन्छिने गरेकाछन्,यो संक्रमणकालिन अवस्था हो,यस्तै हुन्छ । संक्रमणकालिन अवस्था हो भन्ने बुझेका भए उनीहरु किन आपसमै लडाइ गरिरहेकाछन् । यसबाट पार पाउने एउटै निर्विकल्प उपाय चुनाव नै हो भन्दै किन झुटो आश्वाशन दिइरहेकाछन् ?
हामी मान्छौँ पनि कि यसबाट निस्कने उत्तम उपाय चुनाव नै हो । हामी चाहन्छौँ हामी शान्ति सँग बस्न सकौँ,हामी चाहन्छौँ हामी आफ्नै भूमीमा रहनसकौँ । हो,हामी यहाँ केबल शान्तिसँग आफ्नो ठाउँमा बाँच्न चाहन्छौँ तर अफसोच त्यो पनि पाइएकोछैन । यहाँ त जति-जति चुनाव नजिकिँदै छ,त्यति-त्यति नै भय बढ्दै गइरहेको छ ।
खुशीको कुरा “तराईमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका मधेसी मोर्चाहरु वार्तामा बस्ने भएकाछन्” त्यसैले सजिलै चुनाव सम्पन्न हुने पनि देखिन्छ । तर हाम्रा नेताहरुको बेतुक को तर्क अनि बकम्फुसे भाषण ले गर्दा चुनाव पछि पनि अस्थिरता कायमै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
नेकपा एमाले जहाँ पुग्छ त्यहीं भाषण ठोक्दिन्छ –“कसैले भन्दै मा केही हुँदैन,यो पटक बहुमत त एमाले ले नै ल्याउँछ” । उता कांग्रेस को पनि त्यही ताल,सबैनै आफ्नो ढ्याङ्ग्रो बजाइरहेका छन् । यस्तो कुरामा माओवादी को कुरा नआउने हुँदै,हुदैन । उनीहरु आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली ठान्छन्,अनि भाषणमै ठोक्दिन्छन्-“हामी हार्दै-हार्दैनौँ,तर यदी हार्यौँ भने यो चुनाव पनि मान्दैनौँ” । अचम्म छ यहाँका पार्टिहरु र नेताहरुका ताल । के को आधारमा आफ्नो पार्टिले बहुमत ल्याउने ठोकुवा गरिरहेकाछन् ? यदी यो ठोकुवाहरु अन्तरिम संसद मा रहेका सांसद सङ्ख्या को आधार गरिएको हो भने,यो पनि ठूलै भुल हो,पार्टिहरुको किनकि ती सांसदहरु जनताको मत बाट आएका नभै यीनिहरुलाई त कृतिम रुपमा सृजना गरिएको हो । तर यो भन्दा अर्को कुनै आधार पनि देखिँदैन,यी पार्टिहरुका ! अन्यथा परिणाम त चुनाव मा देखिहालिन्छ,किन अहिले देखि नै वादविवाद ?
दिनहुँ घट्दैगइरहेका घटनाहरु त लेखिरहनु अनि भनिरहनु नपर्ला कि,यहाँ चुनाव र चुनावी सभा का निहुँमा दिनहुँ के-के भैरहेकाछन्,एक आमजनता को बुझाइ मा यही नै हो की-“हामी चुनाव मा भोट खसाल्न आतुर छौँ,कृपया जनतालाई आधार मान्ने पार्टिहरु आपसमा झगडा नगरिदेऊ,अनि निर्वाचनलाई निस्पक्ष रुपमा सम्पन्न गरी निर्वाचनको परिणामलाई पनि स्विकार गरिदेऊ” । यो CA Election हो ,यसलाई CA ILL-ACTION नबनाइदेऊ । अनि निर्वाचनको मुखमा आएर नानाथरीका कल्पना गर्न छोडिदेउ,साथै वाक्-युध्द पनि गर्न छोडिदेउ । “हे ! नेताहरु हो – कम्तिमा यो चुनाव,चुनावको लागि मात्र नभै परिवर्तनको लागि हुन सकोस् ।"
Dilip Acharya March 28, 2008 at 10:19 PM
तपाईले भने जस्तो “जनता ले यो चाहेको छ,जनताले त्यो चाहेको छ,जनता हाम्रा पक्षमा छन्” भन्ने धेरै भए तर जनताले सबैभन्दा पहिला शान्ति चाहेको कुरा भने सबैले बुझेर पनि बुझ पचाएर बसेका छन ।
तराईमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका मधेसी मोर्चाहरु वार्तामा बस्ने कुरो पक्कै पनि राम्रो हो तर मलाई तराईका ति मोर्चा भन्दा शहर पसेका तत्वबाट चुनावलाई बढी खतरा भएको महशुस भईरहेको छ।
यसो त २०-२२ गते फेरी चुनाव सार्ने घोषणा हुदैंछ भन्ने हल्ला पनि आईरहेछ तर आशा गरौं चुनाव समयमै र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट हुनेछ अनि यस्को नतिजालाई सबैले मान्नै पर्ने छ।
badri March 29, 2008 at 1:17 PM
ya aakar jee great article writing,
सबै नेता र पार्टिहरुले आफुले जे गरे पनि, नेपाल बन्द गरेपनी, सडक अबरुद्द गरेपनी जनताले चाहेको, जनता ले गरेको बनी सबै दोश हरु जनतामा थोपारिदिन्छन तर जनताले के चाहेको छ त भनेर कहिलेइ बुजेनन .... गजब छ बा .....